Imboni Yemikhiqizo - Abakhiqizi Bemikhiqizo YaseChina, Abahlinzeki
I-DRK908F Inkundla Yokuhlola Ukulingana Kokulingana (Indlela Yebhodi Lebhodi)
I-DRK908F Inkundla Yokulinganisa Ukulingana Kwentambo (Indlela Yebhodi Lebhodi) isebenzisa indlela yokuhlola ebanzi ukuze ihlole ukulingana kwentambo kanye nekhwalithi yokubukeka ebhodini uma kuqhathaniswa nekhwalithi yokubukeka kwentambo yesampula evamile ukuze kuhlolwe ikhwalithi yokubukeka kwentambo ebhodini.
I-DRK908H Intambo Yebhokisi Ngisho Nomthombo Wokukhanya (indlela yebhodi elimnyama)
Ibhokisi lomthombo wokukhanya wokukhanya kwentambo ye-DRK908H (indlela yebhodi elimnyama) isetshenziselwa ukuhlola ukulingana kokulingana kwentambo kanye nenani eliphelele lama-neps.Amazinga ayahambisana: GB/T9996.2 namanye amazinga.Izici: 1. Ithebula lesampula licutshungulwa ngamaphrofayili akhethekile angenisiwe, impahla ilula futhi ingaphezulu libushelelezi;2. Isibonisi esingaphakathi kwensimbi sicutshungulwa ngokufuthwa kwe-electrostatic;3. Kulula ukufaka nokushintsha isibani;ipharamitha yobuchwepheshe: 1. Umthombo wokukhanya: ishubhu le-fluorescent elimhlophe,...
I-DRK908J Yarn Event Light Source Box (indlela yebhodi elimnyama)
Intambo ye-DRK908J ngisho nebhokisi lomthombo okhanyayo (indlela yebhodi elimnyama) isetshenziselwa ukuhlola ukumelela kwebhodi elimnyama lentambo kanye nenani eliphelele lama-neps.
I-DRK835B Fabric Surface Friction Coefficient Tester (indlela ye-B)
I-DRK835B yesihloli se-coefficient yendwangu yendwangu (indlela engu-B) ifanele ukuhlola ukusebenza kokungqubuzana kwendawo yendwangu.
I-DRK835A Fabric Surface Friction Coefficient Tester (Indlela A)
I-DRK835A isihloli se-coefficient yendwangu yendwangu (Indlela A) ifaneleka ukuhlola ukusebenza kokungqubuzana kwendawo yendwangu.
I-DRK302 Textile Moisture Tester
Ilungele ukukala umswakama (ukubuyiswa komswakama) wentambo ehlanzekile noma ehlanganisiwe, i-eksisi, indwangu, isikhumba, njll. kakotini, i-polyester, inhlawulo, i-acrylic, ilineni, i-velvet, uboya, njll. Ukuskena kwe-high-frequency kungangena ku-50mm. wento elinganisiwe ukukala umswakama.
123456Okulandelayo >>> Ikhasi 1/102